स्पेनिस टेनिस स्टार राफायल नाडालले जिते एतिहासिक २१ औ ग्राण्डस्लाम - NA MediaNA Mediaस्पेनिस टेनिस स्टार राफायल नाडालले जिते एतिहासिक २१ औ ग्राण्डस्लाम - NA Media
स्पेनिस टेनिस स्टार राफायल नाडालले सुरुवाती दुई सेटमा पछि परेको स्थितिबाट सानदार पूनरागमन गर्दै करिअरको २१औं ग्रान्डस्लामको रुपमा अष्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जितेका छन् ।
प्रतियोगिताका छैटौं वरीयताका नाडालले दोस्रो वरीयताका रसियन ड्यानियल मेडभेडेभलाई ३–२ को पूनरागमन जित निकाल्दै अष्ट्रेलियन ओपनको च्याम्पियन बन्न सफल भएका हुन् । अष्ट्रेलियन ओपनको च्याम्पियन बनेसँगै नाडाल सर्वाधिक ग्रान्डस्लाम जित्ने खेलाडी बनेका छन् । उनले स्वीस रोजर फेडेरर र सर्वियन नोभाक जोकोभिचलाई पछि पार्दै कीर्तिमानी २१औं ग्रान्डस्लाम जितेका हुन् । रोजर र नोभाकले समान २० ग्रान्डस्लाम उपाधि जितेका छन् ।
मेलवर्न पार्कमा आइतबार भएको रोमाञ्चक, प्रतिस्पर्धात्मक र झन्डै ६ घन्टा चलेको खेलमा नाडालले सुरुवाती दुई सेट २–६ र ६–७ (५–७) ले गुमाएका थिए । पहिलो सेटमा नाडाल २–१ ले तथा दोस्रो सेटमा ४–१ ले अघि रहेपनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा दुवै सेट गुमाए । त्यसपछि खेलमा पूनरागमन गरेका नाडालले तेस्रो र चौथो सेट समान ६–४ र ६–४ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेलमा फर्किए ।
निर्णायक तथा पाँचौ सेटमा सुरुवाती समयमा पछि परेको नाडालले अर्काे पूनरागमन गर्दै उपाधि जितेका हुन् । तेस्रो गेममा १-२ ले पछि परेका नाडालले लगातार तीन गेम जित्दै ४-२ को अग्रता लिए । त्यसपछि मेदभेदेवले खेलमा फर्कने प्रयास गर्दै ५-५ को बराबरी गरेपनि नाडालले सर्भ ब्रेक गर्दै अर्को गेम जितेपछि ७-५ ले पाँचौ सेट जित्दै उपाधि पक्का गरे ।
नाडालसँगको हारसँगै २५ वर्षीय मेडभेडेभले करिअरको दोस्रो ग्रान्डस्लाम उपाधि जित्न असमर्थ रह्यो । यसअघि मेडभेडेभले सन् २०२१ मा नोभाक जोकोभिचलाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको थियो ।
२१औं ग्रान्डस्लाम उपाधि जितेको ३५ वर्षीय नाडाल छैटौंपटक अष्ट्रेलियन ओपनको फाइनलमा प्रवेश गर्दै दोस्रोपटक उपाधि जित्न सफल भएका हुन् । यसअघि नाडाले सन् २००९ मा स्वीस रोजर फेडेररलाई हराएर पहिलोपटक अष्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जितेका थिए । त्यसयता उनले २०१२, २०१४, २०१७ र २०१९ मा फाइनलको यात्रा तय गरेपनि च्याम्पियन बन्न भने सकेका थिएनन् ।
नाडालले फ्रेन्च ओपन सर्वाधिक १३ पटक, युएस ओपन चारपटक, विम्वल्डन दुई पटक र दुईपटक अष्ट्रेलियन ओपन गरी कुल २१ ग्रान्डस्लाम जितेका छन् । नाडाल समग्रमा २९औं पटक ग्रान्डस्लामको फाइनल खेल्दा २१ फाइनल जित्न सफल भए । चारपटक अष्ट्रेलियन ओपनको फाइनलमा पराजित नाडाल २००६, २००७, २०११ मा विम्वल्डन र २०११ मा युएस ओपनको फाइनलमा पराजित भएका थिए ।
हुबहु अनमोल झैं देखिने डान्समा पोख्त उनी, अनमोल केसी चै होईनन् !(हेर्नोस् तस्बिर र भिडियो)
सावधान ! टन्सिल बिग्रँदा लाग्छ मुटु रोग